ဆြာအုပ် နှင့်  ဂမ္ဘီရဓါတ်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ဆြာအုပ် နှင့်  ဂမ္ဘီရဓါတ်စာ
ဆြာအုပ် နှင့်  ဂမ္ဘီရဓါတ်စာ
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Jul 30, 2012 in Photography | 28 comments
မတင်ဖြစ်တာတောင်ကြာသွားပြီဗျို့ ပြင်းနေတာနဲ့ မအားတာနဲ့ .. ပြိုင်ပွဲကလဲ ကြေငြာရုံပဲထင်ပါရဲ့.. ဆုပဲကြှေုငာသွားတယ်.. ထားပါတော့ ဒီတစ်ခေါက်လဲ ကိုကိုတို့ သားရေကျအောင် လုပ်လိုက်အုံးမှပဲ ဗျို့ .. ဆြာအုတ် ဂန္ဓာရီထွက်ရင် မှီဝဲတဲ့ ဂမ္ဘီရဓါတ်စာ ကိုဖော်ပြလိုက်ပါဂျောင်း.. ဂလို ဂမ္ဘီရဓါတ်စာ များပုံမှန်မှီဝဲရင်ဖြင့် အရွယ်တင် နုပျို ကျမ်းမာပြီး ယောက်ျားဂေါင်း မောင်းမတစ်ထောင် ဖြစ်နိုင်ဂျောင်း
စိတ်ဝင်စားသူများ အေးသာယာဝိုင် ကို city mark တွေ မှာ ရနိုင်ဂျောင်းပါ
ချာအုပ် ခညား ..
အဲ့ဖိုတို ပြိုင်ပွဲကို ဆုပေးတာကတော့ ..
အခု မန်းဂေဇက် စာချစ်သူများ စာပေဆု နဲ့အတူ
အချိန် တစ်ခုခု သတ်မှတ်ပြီး ..
တစ်နေရာရာမှာ ဆုပေးပွဲလေး တစ်ခုလုပ်ပြီး …
ပေးမယ်လို့ ပြောနေကြဒါကို မြင်မိပါတယ် ခညား ..
ဒါဂိုတော့ ဆိုင်ရာလူဒွေ ပေါကျဘာလိမ့်မယ် ခညားးးး
အပေါ်ဂဟာဒွေကို ကြည့်ပြီး …
ပါးစပ်ဖျား နည်းနည်း စိုစွတ်လာသလားပါဘဲ ခညားးးးးးးး
ဂလု ဂလု (သွားရည်မြိုချသံ)
တစ်ပတ်ကို ၁ ရက် ဒစ်စကောင့်ချပေးတယ်ဆိုတဲ့ ခြံကြီးပေါ့
ဘယ်နေ့ လဲ တော့ မမှတ်မိတော့ဝူး
Email ပို့ထားတာ မရဘူး လားဗျ .. ဆက်သွယ် ရမယ့် လိပ်စာ ဒါမှ မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ် ပို့ ပေးပါလား ….. ဆက်သွယ်ပြီး လက်ဆောင် ပေးပါ့မယ်ဗျာ … ဒါမှ မဟုတ် … Facebook Account သိတယ် Facebook က Photo တွေလဲ အကုန်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ ရွာပြန်လက်ဆောင်၊ Babygraphy နဲ့ Cover Photos … ဆိုတဲ့ Album တွေကို ကြိုက်မိပါတယ်။ ……. အဲ့ဒီ့မှာ Message လာပေးထားရမလား …..
အဆင်ပြေအောင် ကြည့်လုပ်ကြတာ ပေါ့ဗျာ နော့ .. ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း ပေါ့။
ကလုလင်တို့ကတော့ စုံထောက်ပဲဗျို့..ရှုးတိုးတိုး လျှောက်မပြောနဲ့နော်..
ကိုလု ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ ၀ိုင်ပုလင်းလေးကုန်သွားပြီလားဗျာ…
ငါ့မခေါ်ဘဲ မင်းတို့ချည်းဘဲ ၀ိုင်မြည်းလို့ကတော့ကွာ
ဦးပေါက် ရ .. စ လည်ပတ် နေပြီဗျို့  ….. လကုန် ရင် ရီပို့ လေး တင်လိုက်မယ်။
ကျွန်တော် စနေ နေ့ ညနေ ကနေ sunday တစ်ရက်လုံး တော့ အားတယ်ဗျို့  … ကျန်တဲ့ ရက်တွေက ကုန်ထမ်း နေရတာ မို့ပါ ….။ တွေ့ကြမယ်ဗျာ .. နော့
အဲ့ဒီ အေးသာခြံထဲမယ်။ဘာလို့ ဒေါင်းတံဆိပ်တပ်ပါသလဲ မေးခဲ့တာ
ပြန်ဖြေတာလေး အမူးလွန်လို့ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာ။
ဂလု…. ဂလု….. ဂေ့……………………..
ယောက်ျားလေးပဲ သောက်လို့ရတာလား..မိန်းကလေးတွေရော သောက်လို့ရဘူးလား…
ဒေါင်း တံဆိပ်နဲ့ ၀ိုင်ပုလင်းကို တွေ့လိုက်တော့………
အင်းးးးးးးးး စာပေဆုကို အဲဒီပုလင်းများ ပေးလိုက်လို့ကတော့……..
စိတ်ဆိုးကြမယ် ထင်ပါရဲ့ [:*]
မန့်မယ် မန့်မယ်နဲ့ ..မမန့်ဖြစ်တာ …
အူးလေး ..အဲ့လိုမျိုး သများ ရိုက်တတ်ချင်တယ်ချင့်…
စားပွဲပေါ်တင်ရိုက်တဲ့ ဖု ဖိုတိုဂလပ်ဖီ ကိုပြောပါဒယ်…
အရိပ်ပြန်ထင်နေအောင် မှန်ပေါ်တင်ရိုက်တာလဲ … အဲ့လေ …လာာာာား..
အမှောင်ထဲကပုံတွေကရော ဘယ်လိုဆက်တင်နဲ့ ရိုက်တာ လာာာာာား အဲ့လေ..
ှငှဲ ငှဲ ငှဲ
ဖိုင်ဘာ အနက်ရယ် အဖြူရယ်ပါ
နောက်ခံက တော့ background စ အနက်ရယ် အဖြူရယ်ပါ
ဘေးက မုန့်ကြိူးလိမ် မီး၂ လုံးကို ဖော့ပြား အဖြူ၂ ချပ်ကို ထောင်ပြီး ဘောင့်စ် ပေးထားပါတယ်
ဘက်ဂရောင်းပေါ်ကို မီးရောင်မကျဖို့လိုပါတယ် ကျရင် ဘက်ဂရောင်းစကြီးပါ ပါနေပါလိမ့်မယ်
ကင်မလာဘက်ကိုလည်း အလင်းမ၀င်အောင် ကာထားရပါတယ်
တတ်သိနားလည် သူများ ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ပြောပေးဂျပါ
ကျေးကျေးပါ အူးလေးရေ ….
DIY lightbox နဲ့ ဆော်ခဲ့တယ်ပေါ့…
သများ စမ်းကြည့်ပါဦးမယ်ဗျာ …
အဆင်ပြေတဲ့ အခါ အောက်ဒိုး တူတူ ထွက်ချင်စမ်းပါဘိဗျာ
အူးလေးကလည်း ပညာချိုလိုက်တာများ။ ကိုဂီ လာဘ်ထိုးဖို့ ၀ိုင်ရှိရင် မီးမီးလည်း လိုချင်လို့ စုံထောက်ဦးစံရှားလုပ် ၊ ပုံ ကြည့်ပြီး ထင်တာဝင်ရမ်းတုပ်ရရင်တော့ ……
အရိပ်ပြန်အောင် plexiglass ပေါ်မှာတင်ပြီး strobe နှစ်ခုနဲ့ ရိုက်ထားတယ်ထင်တယ်။
အဖြူရောင်ပုံတွေက အဖြူရောင် plexiglass ပေါ်တင် ၊ ၊ ပုံတော်တော်များများမှာ strobe တခု နောက်မှာ backlit ထား ၊ တခုရှေ့/ရှေ့ဘယ်/ရှေ့ညာ မှာထား
အမှောင်ထဲကပုံတွေက အမဲရောင် plexiglass ပေါ်မှာတင် ၊ အမဲရောင် ဘက်ကရောင်းခင်း ၊ softbox တပ်ထားတဲ့ strobe နှစ်ခုကို ဘယ်တခု ညာတခုထား ၊
အဖြူရော အမဲရော တူတူ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆက်တင်တွေ ကို ရမ်းတုပ်ရရင် ~1/125s – 1/200s ဖြစ်နိုင်တယ် f-stop ကတော့ strobe power ပေါ်မူတည်ပြီး လိုသလောက်ချိန်
ဒါနဲ့ အေးသာယာကို ဒီပုံတွေ ရောင်းရင် ဈေးကောင်းကောင်းရမှာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် အေးသာယာက ရိုက်ခိုင်းထားတာများလား။ ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ မရောင်းချင်ရင်တောင် ဒီဝက်ဆိုက်ပေါ်က ကိုကိုမောင်မောင်တို့ သားရေကျအောင် ကြေညာပေးရတဲ့အတွက် အူးလေးတသက်စာ ၀ိုင် ရမယ်ဆိုပိုကောင်းမယ် :-)
နောက်ထပ် ကျေးကျေးပါ … ကျနော် လုံးဝ မရိုက်ဖူးတဲ့
မသိ နားမလည်တဲ့ ဆက်တင်တွေပါဗျာ …
table top ကို တချိန်ချိန်တော့ … စလေ့လာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျို့ …
ဟိုက် ဆြာအုပ်ကပြန်မန့် ပြီးသွားတာမသိလိုက်ဘူး။ စာရိုက်ဘယ်တော့များမှမြန်ပါ့မလဲမသိ
ကို သကြားလုံးကြော် ကြောတာအကုန်လွဲ ဒယ်
အနော်လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီး ပေါက်ကရ ဆက်တင်နဲ့ ရိုက်ထားတာဂျ
အဲမသိတာလေးရှင်းပြပါဦး.. အဖြူရော အမဲရော တူတူ ဖြစ်နိုင်တဲ့ setting ဆိုတာလေး
အ၀ါရောင်က သစ်တော်သီးဝိုင်တွေလား မသိဘူး။ အရသာချိုတယ်။
ဘယ်အချိန်လာ ကြည့်ကြည့် သရေကျဒယ်ဗျ ဂလု ဂလု ဂု ဂေ့့
၂ ခါပြန်တောင် အားပေးထားတယ်ဆိုတော့
အေးဗျ အေးသာယာက ဝိုင်တွေပါ။၀ယ်
မြန့်မာ့တံဆိပ်က အဆင့်အတန်းအဲဂလောက်ထိရောက်တာ ဂုဏ်ယူစရပါ။
ဈေးတော့ မပေါဘူးဗျ(အနော့အတွက်ပါ) အနော်က အာရကေမပေါဘူးလေ။
အဲဟာကိုပိုင်တဲ့ ခြံပိုင်ရှင်က ခရိုနီတွေကိုပိုင်တဲ့
အေးဗျ အေးသာယာက ဝိုင်တွေပါ။
မြန့်မာ့တံဆိပ်က အဆင့်အတန်းအဲဂလောက်ထိရောက်တာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။
ဈေးတော့ မပေါဘူးဗျ(အခြေခံ နဲ့ အလယ်အလတ်တန်းစားတွေအတွက်)
ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေအတွက်အဓိကမရည်ရွယ်ဘဲ export အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးအရည်အသွေး
ထိန်းပေးပြီးထုတ်နေတာ။ဒါကိုပဲ ကြံဖန်ဂုဏ်ယူရမလိုထင်ပါ့။စိတ်ကုန်တယ်၊ဒီမှာစိုက် ဒီမှာလုပ်
ဒီကပြည်သူတွေအတွက် မဟုတ်တာကိုတော်တော်ဝမ်းနည်းမိတယ်။ ကောင်းတဲ့ ငါး၊ပုဇွန်တွေ၊
တော်ဘီ ငိုချင်လာဘီ………..၀မ်းနည်းသွားဘီ [:-((]
မြန်မာနိုင်ငံကြီးအဓွန့်ရှည်စွာ မည်သူကိုမှအားမကိုးရသော နိုင်ငံဖြစ်ပါစေ……………[:-bd]